ဖိုင်ဘာ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Tag Archives: အမှငျြ
Lynx Technik IBC 8 မှာ 2019K SDI Fiber Converter ကြေညာ
Lynx Technik, modular signal ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ interfaces ၏ပံ့ပိုးပေး IBC 8 မှာကုမ္ပဏီရဲ့စီးရီး 8 ထုတ်ကုန်လိုင်းများအတွက် 5000K SDI converter ကိုမှ Fiber နှင့် Fiber ရန်၎င်း၏အသစ်အ 2019K SDI ဖြန့်ချိသည် 8.C65 ရပ်တယ်။ အဆိုပါဒီဗီဒီ 5480 HO မော်ကျူးသမျှသောလမ်းကိုတက် 8K SDI ဗီဒီယိုကို formats ကိုထောက်ပံ့ပြီးဖိုင်ဘာနှင့်လျှပ်စစ် interface ကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ ဤရွေ့ကား ...
Globecast ပထမဦးဆုံးဖောက်သည်အဖြစ် Deutsche ကောင်းစွာ HD ကိုအတူသစ်ကို HOTBIRD ပလက်ဖောင်း၏ပစ်လွှတ်မှုအတွက် Eutelsat နှင့်အတူမိတ်ဖက်
Globecast ဈေးကွက်ထဲမှာ HD ကိုမှ SD ကကနေကြီးထွားလာပြောင်းရွှေ့ကျေနပ်အောင်နိုင်ရန်အတွက်သစ်တစ်ခု HOTBIRD ပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးရန် Eutelsat ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူ၎င်း၏မိတ်ဖက်တိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှမွေလသည် Lemercier မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းများညွှန်ကြားရေးမှူးကျနော်တို့ HOTBIRD ပေါ်မှ HD ရန်ရွှေ့ပြောင်းကြီးထွားဖို့ဆက်လက်အဖြစ်အနောက်ဘက်ကနေအရှေ့ဥရောပတလွှားစွမ်းရည်ဝယ်လိုအားတိုးမြှင့်မြင်ရပါတယ် "ဟုပြောသည်။ TRT Arabi နှင့်ဘီလာရုစ် ...
ခုနစျပါးအသစ်များကို Arabic အဘိဓါန် channel များကိုဖြန့်ဝေဖို့ Globecast အမေရိကနှင့်အတူ Hotwire ဆက်သွယ်ရေးမိတ်ဖက်
Globecast, မီဒီယာများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ပေးသူ, ခုနစ်ရက်သစ်ကိုအာရဗီဘာသာစကား channel များကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ Hotwire ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါလိုင်းများကို Alaraby, ဒူဘိုင်းတီဗီ, Sama ဒူဘိုင်း, ကူဝိတ်တီဗီ, မြင်ကွင်းကျယ်ရုပ်ရှင်, မြင်ကွင်းကျယ်ဒရာမာနှင့် Sky News, အာရေဗျပါဝင်သည်။ ဝိန်း Fort Lauderdale, FL ထဲမှာအခြေခံပြီး Hotwire ဖို့အကောင်းဆုံး-In-လူတန်းစားန်ဆောင်မှုကယ်နှုတ်တော်မူရန်၎င်း၏ All-ဖိုင်ဘာကွန်ယက်ကိုအသုံးချဖို့, နိုင်ငံ၏ဦးဆောင်ဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူးဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသည် ...
crystal Vision ၏ MEDIACITYUK မှာအဓိကဗြိတိန်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်တိုးချဲ့အထောက်အပံ့ပေးတယ်
အိုင်ပီအလှူငွေနည်းလမ်းများဆီသို့ဦးတည်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဘီဘီစီ-ကျယ်ပြန့်မဟာဗျူဟာရဲ့တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်ဘီဘီစီမြောက်တိုက်ရိုက် MediaCity ကျောင်းဝင်းသို့ IP ကိုဆားကစ်ဆင်းသက်နိုင်စွမ်းတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ Crystal Vision ၏ထံမှ modular devices များတစ်ဦးကနံပါတ်တစ်ခုလက်ရှိ HD ကို / SDI အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အတူ interface နိုင်ရန်အတွက်ဒီတိုးချဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ "ကျနော်တို့က baseband ၏ချိန်ခွင်လျှာဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့် ...
crystal Vision ၏က၎င်း၏အသစ်ကဘောင်စနစ်ဖိုင်ဘာ transmitter ကိုနှင့်လက်ခံဖြန့်ချိ
crystal Vision ၏က၎င်း၏အသစ်သောမျှော်မှန်းချက်ဘောင်စနစ်တစ် fiber optic transmitter ကိုနှင့်လက်ခံဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အဆိုပါ FTX-VF, dual-ရုပ်သံလိုင်းဖိုင်ဘာ transmitter ကိုနှင့် FRX-VF, dual-ရုပ်သံလိုင်းဖိုင်ဘာလက်ခံကြီးမားသောအကွာအဝေးကျော် 3Gb / s နဲ့, HD နဲ့ SD ကအချက်ပြမှုများကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လက်ခံရရှိရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ SMPTE 297-2006 တိုခရီးရှည်သွားသတ်မှတ်ချက်အစည်းအဝေး, သူတို့က Single-mode ကိုသို့မဟုတ် Multi-mode ကိုဖိုင်ဘာနှင့်အတူအသုံးပြုနေကြသည်နိုင်ပါတယ် ...
Lynx Technik AG က, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် AV စနစ်ဆစ်ဂနယ် application များအတွက် modular interfaces ၏ပံ့ပိုးပေးဒီနေ့ကအသစ်သုံးမျိုးတစ်ခုတည်း link ကို SDI 12G နိုင်စွမ်း module တွေနှင့်အတူ၎င်း၏ yellobrik စီးရီးတိုးမြှင့်ထားပြီးကြေညာခဲ့သည်။ တစ်ဦးကဖိုင်ဘာ transmitter ကို (OTX 1410), ဖိုင်ဘာလက်ခံ (ORX 1400) နှင့်အမျှင်ဓာတ် transceiver ကို (OTR ကို 1410) ။ fiber optic သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၏ Lynx Technik ရဲ့ပြီးသားကျယ်ပြန့်လိုင်း-up, ယခုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ...
2017 NAB Show မှာ Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ
အဆိုပါ 2017 NAB Show မှာ, Artel ယင်း၏ DigiLink နှင့် InfinityLink ပလက်ဖောင်းနှင့် FiberLink (R) fiber-optic ဂီယာထုတ်ကုန်လိုင်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းရည်ပါရှိပါတယ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြပွဲပိုမိုနီးကပ်စွာဆွဲယူအဖြစ်, Artel အခြားအဓိကကြေငြာစေမည်။ 2017 NAB Show ကိုကို Preview ဧပြီလ 24-27 Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ Booth N4511 အိုင်ပီ-အခြေပြု Solutions Artel အထူးသလိပ်စာဖောက်သည် '' ကြီးထွားလာလိုအပ်ချက်များကိုဖို့ဒီဇိုင်းယုံကြည်စိတ်ချရသော, စံချိန်စံညွှန်းများ-based IP ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ် ...
ငါ / ITSEC 2016 မှာ IHSE အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ကုန်များ
ငါ / ITSEC 2058, IHSE ယူအက်စ်အေမှာ / ITSEC IHSE အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို Preview Booth 2016 Draco Tactical Deployable KVM / AV စနစ် Package ကိုပု Draco Tactical VKM-DS (ဗီဒီယို, ကီးဘုတ်, အများနှင့်မောက်စ်ဖြန့်ဖြူးသည့်စနစ်) ကိုပြသပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးကျစ်လစ်သိပ်သည်း, လျှင်မြန်စွာ Deployable KVM / နည်းဗျူဟာစစ်ဆင်ရေးစင်တာများနှင့်အခြားအမိုးအကာ-based command ကိုစင်တာများများအတွက် Ultra-အစာရှောင်ခြင်း command ကို-and ထိန်းချုပ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်စွမ်းရည်ကမ်းလှမ်းကြောင်း AV စနစ်အထုပ်။ , နောက်ဆုံးပေါ်စီးပွားဖြစ်, Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းမြန်နှုန်းမြင့် KVM နည်းပညာအစိတ်အပိုင်းများကနေတညျဆောကျ ...
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ 3G / HD ကို / SD က-SDI နှင့် asi များအတွက်ပို့ဆောင်ရေးစှမျးကိုတိုးချဲ့နေနယူး InfinityLink ဖြေရှင်းချက်ကြေညာ
WESTFORD, Mass - ။ နိုဝင်ဘာ 8, 2016 - Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး, ထုတ်လွှင့်နှင့်ဆက်စပ်စျေးကွက်ထောက်ပံ့ဆန်းသစ် IP- နှင့်ဖိုင်ဘာ-based မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၏လောကဓာတ်-class ကိုပံ့ပိုးပေးသူ, ယနေ့ ILC103A 3G / HD ကို / SD ကမိတ်ဆက် -SDI နှင့် asi transmitter / Receiver ။ အဆိုပါ ILC103A ထုတ်လွှင့်မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၏ Artel ရဲ့ InfinityLink ပလက်ဖောင်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ IL6000 ကိုယ်ထည်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ခုနှစ်, ILC103A ပေါင်းစပ်ပြီး ...
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ AVX 2016 မှာ InfinityLink နှင့် FiberLink ကုန်ပစ္စည်းလိုင်းအကြားတွင်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသရုပ်ပြရန်
WESTFORD, Mass - ။ အောက်တိုဘာ 4, 2016 - Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး, ထုတ်လွှင့်နှင့်ဆက်စပ်စျေးကွက်ထောက်ပံ့ဆန်းသစ် IP- နှင့်ဖိုင်ဘာ-based မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၏လောကဓာတ်-class ကိုပံ့ပိုးပေးသူ, ယနေ့ 2016 Rocky Mountain အတွက်၎င်း၏ပါဝင်မှုထုတ်ပြန်ကြေညာ Denver အောက်တိုဘာ 2016-26 အတွက် audio ဗီဒီယိုကုန်စည်ပြပွဲ (AVX 27) ။ တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအချိန် AVX ပြသခဲ့သည်အဖြစ်, Artel စံပြမီဒီယာ-သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုခင်းကျင်းပြပါလိမ့်မယ် ...
CSP မိုဘိုင်း Productions Fox ကဘောလုံးထုတ်လွှင့်စဉ်အတွင်းနောက်ထပ်ချွေ Fiber ပို့ဆောင်ရေးဘို့ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ် Picks
နိုင်းမြစ်, မကျန်းမမာ - ။ စက်တင်ဘာ 29, 2015 - ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ် (Je), အထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ဖိုင်ဘာရပ်စဲခြင်းနှင့်ထုံးစံဖိုင်ဘာဖြေရှင်းချက်၏ပံ့ပိုးပေးဘို့ဝန်ကြီးချုပ်တစ်နေရာတည်းမှာဆိုင်, ယနေ့ CSP မိုဘိုင်း Productions DFT- အစုတခုချထားသည်ဟုကြေညာခဲ့သည် Fox ကအားကစား '' ကောလိပ်ဘောလုံးထုတ်လွှင့်မှုအတွက် HD ဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုင်တွယ်ရန် 12-JR ဖိုင်ဘာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး module တွေ။ အဆိုပါယူနစ်ထက်ပိုလုပ် CSP enable ...
လွှမီဒီယာအနောက် 2014 မှာ PESA ဆွေးနွေးပွဲလွှဗီဒီယိုအကျိုးကျေးဇူးများ
Huntsville, Alabama - PESA, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံနှင့်ဗီဒီယိုဖြန့်ဖြူးဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ, "Fiber ကိုတင်ပြကြမည်နည်း ဂြိုဟ်တု? ! stream "။ Huntington Beach တွင်, ကာလီဖိုးနီးယားအတွက်နိုဝင်ဘာ 2014-18 ပြေးရသောလွှမီဒီယာအနောက် 19 မှာရှင်းလင်းပွဲအစီအစဉ်ကိုရဲ့အပိုင်း" Discovery Track "PESA ရဲ့တင်ဆက်မှု 11 မှာစတင်: နိုဝင်ဘာ 30 အပေါ် 19 နံနက်။ ယောဟနျသ Naylor, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောင်းအား PESA ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများကတင်ပြ ...